MOG, adeeg la bixiyey Times ku salaysan music online, wuxuu bixiyaa tan oo isticmaala of music inay dhegaystaan. Laakiin nasiib darro, kaliya inaad hesho MOG heeso ay computer dhex web browser. Waxaa loola jeedaa in haddii aadan ku xidhi internet-ka oo aadan sii wadi in lagu bixiyo lambarka, aad ku guul dareysato doonaa in ay dhagaystaan ​​MOG ah music bixiyo ama geeyo music kale online.
Nasiib wanaag, TunesGo iyo Streaming Audio Recorder Qoraynaa weyn audio, taas oo kuu ogolaanaysa inaad kala soo bixi music ka websites music bulshada caanka ah sida MOG iyo badbaadin music MOG qaab MP3. Marka aad si guul leh u soo bixi MOG in MP3 on your computer, uma baahnid inaad u baahan tahay si ay u helaan in ay aad ugu jeceshahay music MOG network waqti kasta. Waxaad si buuxda iyaga ku raaxaysan karaan offline ama ciyaaryahan MP3 warbaahinta sida rikoodh gaariga. Waa maxay dheeraad ah, ka dib markii MOG MP3 diinta sidan, aad si sharci ah leedahay kartaa heeso MOG bixisay weligiis ugu yaraan kharashka.
Tani waxay laba-ada aad u fudud oo si fiican u shaqeeyo. Haddii aad jeceshahay inaad si loogu badalo MOG in Lugood ururinta ama waxyaabo kale, sida hagaagsan music MOG qalabka Apple, taas laba Chine ayaa sidoo kale ku siin awood u leeyahay inuu shaqo taas loo sameeyo effortlessly. Just raaci tutorial tallaabo hoos ku qoran talaabo.
Xalka 1.TunesGo ---- Download Music ka MOG in MP3
Sida loo Download Music ka MOG in MP3 bilaash ah?
Waxaad gudbin karaan tutorial this: Sida loo Download Music ka MOG in MP3 free via TunesGo
1 Ku rakib oo ay maamulaan this MOG smart in MP3 Converter
Ka hor inta duubo, waxaad u baahan tahay inaad kala soo baxdo iyo rakibi app this. Ka dib markii in, double guji icon miiska si uu u bilaabi.
2 Bilow inay muusikada MOG oo u badbaadin doonaa in MP3
Si aan u dhammeys shaqada, waa mid aad u fudud. Just riix "Record" button on geeska kore ee bidix ee ay interface ugu weyn, ka dibna ka heli iyo ciyaaro mid ka mid ah heesaha MOG aad doonayay online. Waa ok. Marka ciyaareed ee music MOG waa ka badan, la duubay si toos ah u joojin doonto. Ama waxad joojin kartaa habka duubo adigoo mar kale la garaaco ee "Diiwaanka" button.
Fiiro gaar ah: Si loo hubiyo tayada lagu qoro, waa in aad hubiso in laba wax lagu jiro qoro. Mid ka mid ah waa in la sameeyo hees MOG sami ah u ciyaaro si aad u qoraan karaan music MOG ku galay mid ka mid MP3 file. Kale waa jiri doonin audio kale iyada oo loo marayo kaarka codka computer song MOG ahayn.
3 Beddelaan MOG in Lugood (Ikhtiyaar)
Haddii aad rabto in ay sii wadaan in ay dajiyaan music duubay MOG in Lugood, waxaad u tagi kartaa maktabadda this app ee, muujiyo song MOG ah, ka dibna riix "Add to Lugood" badhanka hoose ee interface ugu weyn. Muddo ka dib, Lugood aad si toos ah u bilaabi doonto la music MOG aad ee ay "SAR" playlist.
Halkan waa tutorial video si aad tixraac ah:
> Resource > Video > Sida loo Download Music ka MOG in MP3